January 14, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 14, 2021
(Madrid) 15 Jan 2021. Athletic Bilbao ayaa jaratay tikitka finalka Spanish Super Cup kaddib markii ay kaga adkaatay 1-2 kooxda Real Madrid kulankii afar dhamaadka ahaa ee tartankan. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Athletic Bilbao. Daqiiqadii 18-aad Athletic Bilbao ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana Sii akhriso
(London) 15 Jan 2021. Arsenal ayaa garoonkeeda Emirates barbardhac kula dhaafi weysay kooxda Crystal Palace, kaddib markii ay ku kala baxeen 0-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada Premier League ee dalka England. Qeybta hore ee ciyaarta labada kooxood ee Arsenal iyo Crystal Palace ayaa waxay ku kala nasteen barbardhac 0-0 ah. Qeybta labaad ee dheesha marka […]Sii akhriso
At least 5 dead in Sudan border attack as tensions with Ethiopia escalate – CNN
Ethiopia News January 14, 2021
At least 5 dead in Sudan border attack as tensions with Ethiopia escalate CNN Sudan Says Ethiopian Plane Breached Border Bloomberg Sudan’s Apache helicopter crashes near Ethiopia border DW (English) Egypt and Ethiopia blame Sudan for latest impasse in GERD talks The Africa Report Sudan bans aviation over state bordering Sii akhriso
(Madrid) 14 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Real Madrid iyo Athletic Bilbao ee tartanka Spanish Super Cup-ka ayaa la shaaciyey. Kooxda Real Madrid ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Athletic Bilbao si ay u wada ciyaaraan kulanka wareega afar dhamaadka ee tartanka Spanish Super Cup-ka. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku […]Sii akhriso
(London) 14 Jan 2021. Wargeysyada gudaha dalka England ayaa waxay shaaca ka qaadeen in mid ka mid ah tababarayaasha ugu wanaagsan ee ka xamaasha horyaalka Premier League uu noqday musharaxa ugu cad cad ee noqon kara badelka tababaraha reer Spain Mikel Arteta ee kooxda Arsenal. Macalinka reer Portugal iyo kooxda Wolverhampton ee Nuno Espírito Santo uu […]Sii akhriso
Soomaaliya January 14, 2021
Muqdisho (SONNA)-Wasiirka Tamarta iyo Kheyraadka biyaha Soomaaliya, mudane Xasab Cabdinuur Cabdi, ayaa danjiraha Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaz kala hadlay dardar gelinta heshiisyadii is afgarad ahaa oo ay horey u wada galeen wasaaradaha labada dowladood ee walaalaha ah. Kulanka labada mas’uul ayaa maanta ka dhacay xarunta safaaradda Turkiga ee Muqdisho, iyadoo Sii akhriso
(Manchester) 14 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League, kaddib markii ay garoonka Turf Moor ku soo garaaceen Burnley habeenkii Talaadada ee la soo dhaafay. Goolkii Paul Pogba ee qaybtii dambe ciyaarta ayaa ku hogaamiyay kooxda Ole Gunnar Solskjaer inay saddex dhibcood kaga qabtaan Liverpool hoggaanka Sii akhriso
Muqdisho (SONNA)-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda JFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qeyb galay shir-sanadeedka garsoorka Soomaaliya oo ah madal lagu lafa-guro waxyaabihii Garsoorka u qabsoomay iyo caqabadihii ka hor yimid sanadkii tegay, iyadoo lagu jaangooynayo qorsheyaasha sanadka cusub. Ra’iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay hufnaanta hannaanka Caddaaladda Sii akhriso
Shaqooyinka January 14, 2021
Country: Ethiopia Organization: Fred Hollows Foundation Closing date: 28 Jan 2021 Bring your leadership skills and expertise to help eliminate avoidable blindness Key role within a world-renowned international development NGO Located in Addis Ababa, Ethiopia The Fred Hollows Foundation is a development organisation working in more than 25 countries. We help train and Sii akhriso
Madaxweynaha Jubhaland oo shir guddoomiyay shirka Golaha Wasiirada “SAWIRRO’
Muqdisho (SONN)-Shirka Golaha wasiiradda Jubbaland oo uu maanta Shir gudoominayey Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta ka qabsoomey hoolka madaxtooyada Jubbaland ee magaalada Kismaayo. Madaxweynaha ayaa ugu horeyn Golaha uga warbixiyey Shirarkii Garowe ee xalka loogu raadinayey xaalada Siyaasadeed ee Dalka, gaar ahaan arrimaha Sii akhriso